सुनिता गुरुङ महात्मा गौतम बुद्ध आफ्ना शिष्यहरु साथमा लिएर ज्ञान,उपदेश प्रदान गर्नको निम्ति गाउँ गाउँ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ प्रवचन गर्न जानु हुन्थ्यो । एक समयको कुरा हो महात्मा बुद्ध आफ्नो शिष्य आनन्द स्वास्मीलाई लिएर एउटा गाउँमा जादै हुन्थ्यो । बाटोमा एकजना व्यक्ति बुद्धको नजिक आए र हात जोडेर प्रणाम
डा. महेश प्रसाद पुडासैनी, कृषि बैज्ञानिक, क्यानडा (हाल क्यानबिसमा कार्यरत) गाँजा एउटा महत्वपूर्ण वनस्पति हो भन्ने कुरा यहाँ फेरि भन्नु नपर्ला । पौराणिक काल देखि नै यो वनस्पति महत्वपूर्ण थियो भन्ने कुरा छर्लङ भैसकेको अवस्था छ । गाँजाको बिषयमा नेपलमा पनि धेरै वहस् भैरहेको र बिभिन्न सञ्चार माध्यम एवम्
घरवालाले कोठामा नपस्न भनिदिएछन् । अनि शुरु भएको हुन्छ उनीहरूको सडकको बास । पैदल यात्रु छैनन् ! सडक चकमन्न छ । एक्का दुई मान्छे सतर्कताका साथ निस्कन्छन् र ओझेल पर्छन् । एकै छिनमा सन्नाटा चिर्दै हर्न निषेधित शहरमा एम्बुलेन्सको आवाज थिचेर एउटा भट्भटे आउँछ । फेरि आउँछ एउटा चिल्लो कार अर्कातिरबाट ।
एकादेशमा दुई साथी बस्थे । एउटा मच्छड र अर्को झिँगो । उनीहरू सधैँ सँगै बस्थे । उनीहरू सानैदेखि मिल्ने साथी थिए । उनीहरू मिलिमिली मान्छेका कोठामा जान्थे । मच्छड भने मान्छेको रगत चुस्दै बस्थ्यो । झिँगा भने फोहोरको रस खाँदै बस्थ्यो । एकदिन झिँगाले भन्यो "साथी, आज एकदिनको लागि हामी आफ्नो काम साटुम् न !" "हुँदैन,
गणतन्त्र शासन प्रणाली मात्रै होइन,यो नयाँ सभ्यताअनि संस्कृति र सामाजिक जीवन पद्धति पनि होःप्रधानमन्त्री ओली
आज बाह्रौँ गणतन्त्र दिवस। सर्वप्रथम यस दिवसको सुखद उपलक्ष्यमा म यहाँहरु सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यस अवसरमा जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सामन्तवादी प्रणालीमाथि आधारित र जबर्जस्ती थोपरिएको राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापनाको सपना देख्नुहुने र तिनै सपनाद्वारा हामीलाई आन्दोलनमा मार्गदर्शन
अनलाइन शिक्षाबारे डरलाग्दो खुलासा !
कम्प्युटर यानि सुसांख्यको प्रयोगसँगै इन्रनेट सञ्जालको विकास भयो ।अनि सुरू भयो विद्युतीय सूचना आदान प्रदानको इतिहास । सन् १९९० को दशकबाट इन्टरनेट सर्वसुलभ माध्यम बन्यो । सुरुमा एउटा कम्प्युटरको सूचना अर्कोमा पठाइ केही स्थानीय कम्प्युटरबीच चलनमा ल्याइएको जानकारी बाँड्ने इन्रनेट प्रविधि पछिल्लो
कोरोना कहरःछोरीले देखिन् धानको चामल र तोरीको तेल
मोहन दंगाल / कोरोना भाइरसको बढ्दो कहरसँगै म श्रीमती र सानी छोरी सबै हाम्रो पुख्र्यौली थलो हेलम्बु फर्कियौँ । लकडाउन लागु हुनुभन्दा दुई दिन अगाडी नै कार्यालय औपचारिक रूपमा बन्द गरी घरै बाट कामहरू गर्ने निर्णय गरी हामी फर्किएका थियौँ । नेपालमा पनि बिस्तारै कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएसँगै लकडाउन
भोजपुरका र्खाताम्छालीको उभौली ‘चारी’
स्काई राई, स्वामी प्रपन्नचार्यका अनुसार ‘साल वा वर्षमा एकफेर सबै बुढाबुढी, अधबैंसे, तन्नेरी–तरुनी र विजुवा सबैले मुन्धुम गाउँदै सानो खुर्पाले अदुवा अथा अदुवा नपाएको खण्डमा कचुरको चाना हान्दै/काट्दै नाच्ने खुशी मनाउने परम्परा नै सहकाल शब्दको भाव अर्थ हो । यही ‘सहकाल’ शब्द नै अपभ्रंस भइ साकेला
पुरुष प्रधान देशलाई थाहा छैन पुरुष दिवस !
स्काई राई मेरो बाऊले भन्नुहुन्छः तिमीहरूले पढेको के काम ? जबसम्म तिमीहरूले आफूले पढेको कुरा आफ्नै जीवनमा लागू गर्दैनौ भने त्यस्तो पढाईको के अर्थ ? वास्तवमा प्रश्न सही हो । आजकल पढेलेखेका व्यक्तिहरूको व्यवहार आकाश जमिन फरक छ । यस्तै हो भने देश बदल्ने समाज सुधार्ने भन्ने कुरा किमार्थ ‘गफ’ मात्र हो ।
कालापानीले लुटेको स्वाभिमान
एलके राई, भारतसँग हारेको मात्र इतिहास छ, हार्नेहरुले दाउ पारेर, झुुक्याएर आफू विजय हुन खोज्छ हो यहि गर्यो हिजो जम्मु–कास्मिरमा,भुटानमा र आज नेपालमा पनि गर्न खोजिरहेको छ । तत्कालीन इष्ट इन्डिया कम्पनी वा वृटिश—भारत सरकारसँग सन् १८१४—१८१६ को युद्धमा नेपालपक्षको नराम्ररी हार भए पश्चात् नेपालले ४०,०००
हाम्रो संस्कृति कस्ले जगेर्ना गर्ने ?
स्काई राई समय फेरिदै छ । परिवर्तनले त्यही रफ्तार समातेको छ । समयको प्रवाहसँगै सामाजिक गतिविधि पनि फेरिदैछन् । हामी आफैं परिवर्तित हुनुपर्दछ । तर, कस्तो परिवर्तन अगाल्ने भन्नेबारेमा भने सबैले सचेत जरुरी छ । समयसँगै आएको परिवर्तनलाई नपच्छ्याउने हो भने समयको गतिले त्यसलाई डाइनोसर बनाइ दिन सक्छ । त्यसैले
एनआरएनएको भड्किलो चुनाव
टिप्पणीः काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को चुनावी चहलपहल । मंगलबारदेखि काठमाडौंको ह्यात होटलमा जारी नवौं अधिवेशनमा संघका वैचारिक वा अन्य मुद्दाभन्दा पनि चुनावी एजेण्डाले प्राथमिकता पाएको छ । बुधबार बिहान ८ बजेबाट शुरु भएको निर्वाचन प्रक्रियामा उम्मेदवार देखि समर्थकसम्म निकै तामझामका साथ
चीन र नेपाल आपसी लाभ र हितका लागि असल साझेदार हुन्:सी चिनफिङ
सी चिनफिङ राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा म छिटै चीनको मैत्रीपूर्ण छिमेकी देश नेपालको राजकीय भ्रमण गर्दैछु । मैले नेपालको भ्रमण गर्न लागेको यो पहिलोपटक हो, तथापि मलाई नेपाल अपरिचित भने लाग्दैन । नेपालमा शानदार पहाड र नदीहरू छन्, विशिष्ट संस्कृति पनि छ । त्यसैले म नेपालको भ्रमण
भोलामानसिंह बस्नेत,वरिष्ठ धानबाली विज्ञ आज असार १५ अर्थात सोह्रौं (१६ औं) राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव, नेपाल भर एवम् धानको विशेष क्षेत्र बर्दियाको राजापुर– ८,धोविनीपुरमा विशेष रूपले मनाइएको छ । यस बर्षको नारा ‘धानखेतीमा प्रविधि र यान्त्रिकरण, चामल आयातमा न्यूनिकरण भन्ने रहेको छ । मुलुकमा
देवेन्द्रप्रताप शाह, आज बिहान नियमित वाकमा निस्किए देखि नै बुढानीलकण्ठबाट लगनखेल कसरी जाने भन्ने प्रश्न मनमा आइरहेको छ । लगनखेलस्थित भीएफएस ग्लोबल नेपालको अफिसमा जानु पर्ने छ । हिजो त्यहाँबाट पासपोर्ट लिन बोलावट आएको छ । स्थानीय युनिभर्सल कन्सल्ट्यान्सीको सहयोगमा क्यानडाको भिजिटिङ भिषाका लागि १५
मधुसुदन ओझा, अर्थमन्त्रीमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते सरकारको यस बर्षको वार्षिक बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नु भएको छ । पानी समेत नपिएर पाठ गरिएको बजेट भाषण हरेक वर्षको निरन्तर श्रृखला हो । फेरि बजेटबारे सत्ता पक्षको वचावट र प्रतिपक्षको विरोध पनि सुरु भइ सकेको छ । त्यसो त बजेट व्यवस्था हुँदैमा
राजेन्द्र दाहाल, भगवान को हो ? भन्ने प्रश्न गरियो भने कतिलाई निकै अलमल हुन्छ । केहीले आफ्नो तर्क पेश गर्छन् कतिले दिने रेडिमेड जवाफ हो ब्रम्हा, बिष्णु, शिव, बुद्ध, येशु, अल्लाह आदिआदि । यिनै त भगवान हुन् । अ–आफ्नो धार्मिक मिथले यसलाई पुष्टि गर्न खोजेको पनि देखिन्छ । तर, यसैसँग जोडिएका
हाम्रै जीवनकालमा नेपाल समृद्ध बन्छ भन्ने विश्वास कसरी जगाउने ?:प्रधानमन्त्री
देशभित्र र बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु, नयाँ वर्ष २०७६ को मङ्गलमय शुभकामना । गए रातिबाट हामीले विक्रम सम्वत् २०७५ लाई बिदा ग¥यौँ । आशा, उत्साह र अपेक्षाका साथ गएको वर्ष शुभारम्भ भएको थियो । मुलुकलाई समृद्ध बनाउन हामी सबैले सिङ्गो वर्षभरि आ–आप्mनो स्थानबाट सक्दो मेहेनत ग¥यौँ
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राष्ट्रका नाममा सम्बोधन (पूर्ण पाठ)
प्रधानन्त्री केपी ओलीले सरकारको एक वर्ष पुरा गरेको अवसरमा आज देशवाशीका नाममा सम्वोधन गरेका छन् । सम्वोधनमा उनले सरकारले एक बर्षमा गरेका कामहरुको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त सम्वोधनको पूर्ण पाठ यस्तो छ
विप्लवको पुस्तक ‘महापतन’बारे डा.ऋषिराज बरालको चोटिलो प्रहार
डा. ऋषिराज बराल, विप्लवले जसरी घटनासन्दर्भलाई ‘उनीहरू’ र ‘हामीहरू’ मा विभाजन गरेका छन्, यो राजनीतिक इमानदारी होइन, यो यथार्थको सामना गर्न नसक्ने भगुवा प्रवृत्ति हो । सँगै हुँदाका हरेक कामकारवाही पार्टीका निर्णयहरू ‘हामी’ सित सम्बद्ध हुन्छन् । विषयप्रवेश ‘महापतन’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका
यस्तो छ धनतेरसको महत्व
तिहारको पहिलो दिन अर्थात काग तिहारलाई धनतेरसका रुपमा पनि मनाइने प्रचलन छ । हरेक वर्ष कार्तिक कृष्णपक्ष त्रयोदशीका दिन पर्ने यो धनतेरस आयुर्वेदका प्रवद्र्धक मानिने धनवन्तरीलाई आरोग्यका प्रतिकका रुपमा पनि पूजा गर्ने प्रचलन छ । आजैको दिनलाई धनका देवता कुबेरका जन्म दिन मानेर धन सम्पत्ति जोडने र त्यसलाई
शक्ति पूजाको महिमा र रूप
दुुर्गा को हुुन् ? किन उनको सम्झना र पूूजा गरिन्छ ? कहिलेदेखि पूूजाको परम्परा र विधि सुुरू भएको थियो जस्ता जिज्ञासा धेरै उठने गर्छन् । यसका लागि हिन्दु परम्पराका मानक शास्त्र, पुुराण र धर्मशास्त्रको अध्ययन जरूरी हुन्छ । विभिन्न शास्त्र एवं पुुराणको भनाइ अनुुसार यो जगतको उत्पत्तिको आरम्भमा कतै केही थिएन
बेलायतबाट सिक्न कति छ कति
विष्णुप्रसाद पन्त, बेलायत संसारकै शक्तिशाली सम्पन्न देश मध्येमा पर्छ । यहाँको चरम आधुनिक विकास, वेशभूषा र रहनसहनलाई नेपाली आँखाले हेर्दा अनौठो लाग्नु स्वभाविक हो । मैले बेलायतबारे पढ्दा, सुन्दा र अनुमान गर्दा जे जस्तो ज्ञान आर्जन गरेको थिए, त्यहाँ पुग्दा निकै फरक र रोमाञ्चक अनुभूति गरेँ । छोटो यात्रामा
राहत शिक्षकको आन्दोलन किन ?
धर्मराज जोशी, कैलाली सरकारले विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न कसिलो कानुन नबनाएका कारण मुलुकको विद्यालय तहको शिक्षाले गुणस्तरीय फड्को मार्न सकेको छैन् । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने जग नै बलियो नभएपछि उपल्लो तह राम्रो हुने कुरा भएन । कलिला बालबालिकाको भविष्य निर्माता शिक्षक वर्ग जबसम्म राज्यबाट पेलानमा
हिन्दुत्व विरोधी संविधान
अभिषेक जोशी पृष्ठभूमिः नेपालको संविधान जारी भएको ३ वर्ष पूरा भएको छ । जननिर्वाचित दोस्रो संविधानसभाबाट निर्मित संविधान संसारकै उत्कृष्ट भएको टिप्पणी गरिन्छ । २०७२ साल भदौ ३० गते २ संविधानसभाका तिहाई सदस्यबाट पारित यो संविधान संसारकै पछिल्लो जनमतबाट निर्मित संविधान पनि हो । तर, बिडम्बना यस्तो महत्वपूर्ण
अमरवाणी अनलाइन डट कम आज १ वर्ष पूरा भएको छ । व्यावसायिक पत्रकारिताको स्पष्ट अठोटसहितको यात्रालाई साथ दिने आमपाठक वर्ग,विज्ञापनदाता र शुभेच्छु सबैमा धन्यवाद अर्पण गर्दर्छौ । मिडियाको लक्ष्य भनेकै वास्तवमा निर्भीक, स्वतन्त्र र मर्यादित पत्रकारिता नै हो । साथै मुलुकमा लोकतान्त्रिक स्थायित्व, शान्तिको
सरस्वती पाण्डे ‘सरस’/नेपाल मन्दिर नै मन्दिर भएको देशको रूपमा विश्वमा परिचित छ । धार्मिक तथा साँस्कृतिक ऐतिहासिकता नेपालको आफ्नै विशेषता हो । यस्तो देशमा जन्मिन पाएको आफैंलाई गर्व भएको अनुभूति हुन्छ । म सबैं धर्मलाई सम्मान गर्छु । तर, म हिन्दु हुँ । भगवानप्रति आस्था सबैको हुन्छ । सबै धर्मको सारतत्त्व
बेलौरी गुमनाम नाका
अभिषेक जोशी/अमरवाणी, सन् १८५७ मा भारतमा अंग्रेज शासनविरुद्ध सैनिक विद्रोह सुरू भयो । संसारभर एकछत्र राज गरिरहेका अंग्रेजलाई भारतबाट हटाउन ठूलै आन्दोलन र बल आवश्यक थियो । छिमेकी नेपालबाट भारतीयहरूले सैनिक सहयोगको अपेक्षा राखेका थिए । तर, तत्कालीन श्री ३ जंगबहादुर राणाले उल्टो अंग्रेजको समर्थन गरे
काभ्रेका सामुदायिक विद्यालय राजनीतिको खेल मैदान
यादब थपलिया, जिल्ला शिक्षा समिति काभ्रेले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको काज सरूवा वदर गरेपछि शिक्षा क्षेत्रमा पुनःराजनीतिक चलखेल शुरू भएको छ । पूर्व जिल्ला शिक्षा अधिकारी डा. दीपेन्द्र गुरुङले गरेको शिक्षकको काज सरुवा बदर गरेर सम्बन्धित विद्यालयमै फिर्ता पठाउने निर्णय शिक्षा समितिले गरेपछि समस्या
ब्लग : ‘घाँडो’ भयो संघीयता
सरस्वती पाण्डे 'सरस'/मुलुकमा बलियो सरकार छ । तर, जन अनुभूति भने कमजोर, सरकार भएको र कतिपय अवस्थमा सरकार नै नभएको अनुभूति गरेको सुनिन्छ । संघीय प्रणालीमा मुलुक होमिएपछिको यस अवस्थामा संघीयता कार्यान्वयनको सकस करको दायरा फराकिलो पारिएको अवस्थाले बुझाएकै छ । के देशमा संघीयता टिक्दैन ? संघीयताको राँको